Ezona zixhobo zeLogo zikwi-Intanethi
Izixhobo zoYilo: Ingcebiso, uKhuphelo, iiFatografi, kunye neZenzo eziBalaseleyo
NgoLwesithathu, Novemba 4, 2020 Lwesine, Matshi 11, 2021 Douglas Karr
Lithini ixabiso le logo? Buza inkampani efana noNike kwaye ungathi izigidi zeedola- kodwa inyani yile, ngo-1971, UNike uhlawule i $ 35 yelogo yabo. Ezi ntsuku, inqanaba lokuya kuyilo lwe logo lobungcali linokubakho naphi na phakathi kwe- $ 150 kunye ne- $ 50,000. Kutshanje sisebenze kunye nomthengi ochithe i-16,000 yeedola kuyilo lwe-logo ukuyifumana kuphela xa besenza uPhononongo lweMifanekiso kuGoogle kwishishini labo… bayilahlile inkampani kwaye benza ukhuphiswano loyilo kwi-intanethi endaweni ye- $ 250 kwaye bafumana eyokuqala, eyahlukileyo, kunye nelogo eyilwe kakuhle elingana nophawu lwabo ngokubanzi.
Sibona ixabiso kwi-brand iyonke, isikhokelo sophawu lwentengiso, kunye nelogo ehamba nayo. Oko kunokuba lutyalomali olubalulekileyo, kodwa iinkampani ezenze utyalomali zizibonile iziphumo. Ngamanye amaxesha awunakufikelela kuloo nto, nangona kunjalo, kwaye siyaqonda! Ukuba ufuna nje ilogo, kuko konke ukuthembeka kukho izibonelelo ezithile ezimangalisayo phaya.
Nazi izinto ezingaphezulu kwama-50 yoyilo lwezixhobo endizifumene kwi-Intanethi, ukusuka kukhuthazo ukuya kumabhaso, ukhuphiswano kunye nokuhanjiswa kwabantu, iibhloko kunye neendawo zembali. Yonwabele!
Yithande le vidiyo yomyili ngokwenyani wenza ilogo kwiAdobe Illustrator.
Uyila njani iRandi egqibeleleyo
Fumanisa ukuba kuthatha ntoni ukwenza i-logo efanelekileyo kwezi 10 zeengcebiso zoyilo eziyimfuneko ezisuka U kudala, kunye nelogo yoyilo infographic! Yonwabele.
Ilogo kufuneka ibe elula.
Ilogo kufuneka ibe lixesha.
Ilogo kufuneka ibe creative.
Ilogo kufuneka ibe iyafundeka.
Ilogo kufuneka ibe iyasebenza.
Ilogo kufuneka ibe noluphendulayo.
Ilogo kufuneka ibe unique.
Ilogo kufuneka ibe ezifanelekileyo.
Ilogo kufuneka ibe bulumko.
Ilogo kufuneka ibe professional.
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Conversions
Ngamanye amaxesha uyayazi into oyifunayo, kodwa ngokulula awunayo italente yokuthatha isiketshi sakho se-napkin siye kwilogo yobungcali.
Iimpawu zeLogotypers - Layisha umzobo (umfanekiso kunye nefowuni yakho, ifayile yePowerPoint, okanye umzobo wePeyinti) kwaye siya kuyiguqula ibe lilogo enkulu kwiiyure ezimbalwa.
Yila eyakho iLogo yakho
UyiloEvo ngumenzi welogo okwi-intanethi okunceda ukuba wenze iilogo ezizodwa kunye nezobuchule simahla. Banikezela ngaphezulu kwesigidi seempawu ezikhoyo ukukhangela, amakhulu eefonti yokubhaliweyo kunye neemilo onokukhetha kuzo kunye nesixhobo esinamandla sokuhlela ukwenza i-logo yakho ngokwezifiso.
Qalisa ukwakha iLogo yakho
Izixhobo zoYilo zeCrowdsourced:
Iindawo ezixhaswe ngabantu zinenethiwekhi yokuhambisa abayili bemizobo abanokungenisa iilogo. Ophumeleleyo unikwa imali. (Inkulu kuwe… ayisoloko ilungile kubayili!)
Iziqwengana -Isihlwele esivela kwi- $ 200.
UyiloKhuphiswano -Sungula ukhuphiswano lwakho kwi- $ 100.
UyiloLokuYila -Ukufuna uyilo lweLogo? Crowdsource Uyilo lwakho kwi-Intanethi ngoku!
Indawo yedijithali -Posa ixabiso lakho kunye neemfuno zakho kwezi foram.
eYeka Imincintiswano yabantu apho ubiza khona ixabiso lakho (amaxabiso anyukayo kunye namabhaso).
Iiyure eziyi-48 Uyilo lwabantu abaninzi ukusuka kwi- $ 89
Ukhuphiswano lweMizobo Ukhuphiswano oluvela kwi- $ 1,000
Igrafikhi - logo yoyilo kunye neetemplate
Ngokwahlukileyo - ukhuphiswano oluvela kwi- $ 100
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- MyMay - ukhuphiswano oluvela kwi- $ 200.
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo -Fumana i-logo oyifunayo ngokukhetha ukusuka kwi-50-200 + yoyilo lwesiko ukusuka kwi- $ 275.
99designs Uyilo lwabantu abaninzi ukusuka kwi- $ 211
MyCroBurst -Isihlwele esivela kwi- $ 149
YOKUYILA -Kubamba ukhuphiswano lwakho loyilo
ZenLayout - ukhuphiswano oluqala kwi- $ 250
Iinkampani zeLogo yoBuchule:
Iiarhente ezibonelela ngeenkonzo zelogo ngokubanzi ziqinisekisa ukuba umsebenzi wazo wahlukile kwaye usebenza ukutshatisa ilogo yakho negama lakho liphela.
Uyilo lweLogo efikelelekayo - iipakeji ezivela kwiidola ezingama-45.
ShishiniLogo.net - iipakeji ezivela kwiidola ezingama-99.
BXC - Inkampani yophawu, cela ikowuti.
Iifolda zeNkampani Ukubonisana simahla, inkonzo yoyilo eqala kwi- $ 75 ngeyure
Ubungakanani beLogo yoyilo - uyilo oluvela kwi- $ 89
Inkd -Iipakeji zoyilo lobuchwephesha ezivela kwi- $ 99
IlogoBee - uyilo oluvela kwi- $ 199
Ifowuni yoMveliso Iimpawu zelogo ezivela kwi- $ 395
ILogo Design Iqela - iipakeji ezivela $ 149
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Arhente yoYilo yaMazwe ngaMazwe -Nxibelelana nezicatshulwa
Ilogo yeLoft - iipakeji ezivela kwiidola ezingama-99.
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Magic.com Iiphakheji eziqala kwi- $ 269.
Ilogo yeNerds.com Iiphakheji eziqala kwi- $ 27.
Ukungena Iiphakheji eziqala kwi- $ 250.
Umsebenzi weLogoworks -Ivela kwi-HP, uyilo oluvela kwi- $ 299.
I-NetMen Uyilo oluqala kwi- $ 149.
I-Vistaprint -Iimpawu esele zenziwe kunye nezenzekelayo eziqala simahla zisebenzisa iinkonzo zabo.
Mhlawumbi ungathanda ukuzama ukwenza ilogo yakho okanye ufumane ezimbalwa ezikhuthazayo onokuthi ubhekise kuzo! Nazi ezinye iziza zoncedo olukhulu lweelogo.
Ibhlog-yeemoto -Umcebisi ophawulayo nguJeff Fisher
Uyilo - indawo evela kwi-Envato
Iimpawu ezaziwayo - iwebhusayithi ezinikele ekukuziseleni ezinye zeendaba ezilungileyo, uphononongo kunye nolwazi olunxulumene nomzi mveliso we logo.
Umthi weengodo -I-Logobird yibhlog esekwe eLondon kunye ne studio.
Inkampani yeLogo -Iimpawu zoyilo zaMasiko… ukuthatha uyilo kwiindawo eziphakamileyo.
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Bliss -Uyilo lweoyile yokukhuthaza kunye negalari yendawo.
LogoPond -I-Logopond ibonisa okona kulungileyo kumsebenzi wesazisi kwiwebhu yonke. Ilogo yomculi kuwo onke amanqanaba ophuhliso kunye neendawo zehlabathi rhoqo kule ndawo.
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Blog -Iblogi yeBlogi inikezelwe ekubeni sisixhobo sokuqala sewebhu kuyilo lwe logo.
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Design Blog -I-logo yoyilo yeBlog iyibhlog egxile kuphawu lwentengiso, ilogo kunye noyilo lwesazisi.
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- From Dreams Awards -Ibhlog enezingeniso zenyanga kunye nophumeleleyo ngenyanga.
Logolog -I-Logolog yibhlog malunga noyilo lwe logo.
Logolounge -Iindaba kunye nentsingiselo yelogo.
Imithombo yeendaba iBistro Indawo yewonga yonyaka.
I-logo yam DK New Media
Kwiminyaka eyadlulayo, umyili wam wabona ilogo yam kwaye waqhubeka endibuza ukuba ndingathanda ukuba ihlaziywe. Ndiqhubeke ndathi hayi emva koko wandinika ingxelo yakhe…
Umzekelo omangalisayo wento eyahlukileyo nengalibalekiyo (ngokoluvo lwam). Umculi wenze izinto ezininzi:
Ufake zombini d kunye k (uhlobo)
Usebenzise utolo oluphezulu ukubonisa amandla am okunceda abathengi bakhule.
Usebenzise ii-angles ezingaqhelekanga kwicala ngalinye le-logo ukumela ukuba andizenzi izinto ngokwesiqhelo.
Ngelixa ndingakhange ndimbuze ukuba ndiyile ngokutsha, ndakhawuleza ndathandana nendlela eyayibonisa ngayo uphawu lwam. Ndayila amakhadi kwakhona, imiqondiso yam, kunye newebhusayithi yam ngosuku olulandelayo!
Thenga iifayile zeVector logo ukuyila eyakho
Siyabathanda abaxhasi bethu e Depositphotos Kwaye banetoni yeelogo onokuzithengela iifayile ze vector. Bona into ekufutshane nale uyifunayo? Yithenge, uyikhuphele kwaye uyenze ngokwezifiso ukuze ibe yeyakho!
Thenga iiVectors ngoku!
Ukubhengezwa: Sisebenzisa amakhonkco obulungu kuyo yonke le post.
Amanqaku ongezelelweyo kunye ne infographics
Uyila njani i-logo eyodwa nengalibalekiyo
tags: Uyilo oloyikekayo lwe logoEyona logo yoyilo yeyona nkampaniEyona logo ilungileyo kwi-IntanethiEyona nkonzo yoyilo ilogo kwi-IntanethiThenga ilogoThenga ilogouyilo lwexabiso eliphantsi onlineiilogo ezingabizi kwi-intanethiImvelaphi yelogo logo yoyiloisihlweleUyilo lwe logo yezixhobologo yezihlweleUyilo lwe logo yezihlweleUyilo lwelogo yewotshiiilogo ezihambisa abantu abaninziiifotoYila ilogologo yoyiloukhuphiswanodesignevoUyilo lwelogo ye-intanethiuyilo njeUluhlu lweendawo zelogologouphawu lokonwabalogo yebhloglogo yoyilo lwenkampanilogo uyilo kukhuphiswanouphawu lwe-infographicimpembelelo yelogoiisayithi zelogologo yophandoiilogo zithwalaloungengeyelogoponduphawuizimvo zelogo yokuthengisabistro yeendabauyithenga phi ilogo
Juni 6, 2010 ngo-10: 40 PM
UDouglas-Enkosi ngokusifaka kuluhlu lwakho.
I-FYI sisandula ukumilisela ifom entsha, enobulungisa 'yokuxutywa kwabantu okuxubeneyo' apho abathengi banokumema kwaye babhatale abayili abathile ukuba bangenise ukhuphiswano loyilo - jonga ukukhutshwa kwethu kumaphephandaba ukusukela namhlanje: http://prwire.com.au/permalink/18300/design-contest-website-launches-hybrid-crowdsourcing-model-with-15-000-designers-2
Inqaku eliphambili koku kuthetha ukuba abayili bafumana intlawulo eqinisekisiweyo nokuba uyilo lwabo lukhethiwe. Ukuhanjiswa kwabantu abaninzi akunyanzelekanga ukuba kuphumelele kuthatha konke okanye, njengoko usitsho, "ayilunganga kubaqambi"! Ukuba unomdla wokwenza udliwanondlebe kunye nam okanye ukuqhuba iprojekthi yokufunda ngesifundo seCustomCrowd nceda unxibelelane http://twitter.com/designcrowd 😉
Kwakhona, Nazi izixhobo ezimbalwa zoyilo lwewebhu kwiwebhusayithi yethu.
Juni 7, 2010 ngo-9: 28 AM
Ngelixa ndincoma ukubanakho kwakho kuGoogle "uyilo lwe logo", ndikufumanisa ukwanda kunye nokubhiyozela uyilo lwexabiso eliphantsi kungathandeki. Iziza ozinike zona ngoku zibonelela ngokukhangeleka kakuhle (ngokuhambelana "negama lakho apha"), ngaphandle kokucinga qhinga konke konke.
Ukutyhala iisayithi zelogo ye-logo - ngelixa uthumela iingcebiso ekuqinisekiseni ukuba ufumana ilogo "yoqobo" - iyahlekisa ukuba ayikhathali kancinci.
Uchanekile kwinqanaba elinye: ufumana oko ukuhlawulayo. Nangona kunjalo, ithemba lam ngabafundi bakho kukuba baya kwenza inkuthalo ethe kratya ngaphambi kokunikezela nge logo yabo njengenxalenye yokhuphiswano loyilo.
Inqununu, umlawuli woyilo
Juni 7, 2010 ngo-11: 07 AM
Yixabise ingxelo (uyenze ngenene) kwaye ndiyayiqonda imeko yokuchaphazeleka kweearhente eziphantsi kwazo ukubonisa ukubaluleka kwazo. Andilithandabuzi ixabiso lakho - ndizibonile iifemu ezinje ngeKristian Andersen zithatha iinkampani zisuka kwinto ziye kumakhulu ezigidi zeedola- ezinye zazo zinetyala lokuqonda uphawu lwazo.
Uyilo lwe logo luhlaselwa-ngokungafaniyo nayiphi na inkampani esekwe kwi-web okwangoku. Sinabantu abanjengoChris Anderson bekhwaza "Simahla!". Iindawo zokubamba ividiyo azinakukhuphisana neYouTube, iinkampani zeAnalytics ziye zasokola kuGoogle, kunye neenkqubo zeCMS ezinje ngeSquarespace ekhuphisana neWordPress.
Ndingathatha ukuma ndiphikisane no “Akukho Okucacileyo”, kodwa ndizisebenzise ngokobuqu ezinye zeenkonzo kwaye ndifumene iziphumo ezihle kakhulu kubo. Akukho nto uyifihlayo kwinto yokuba ungabathandi, bayanda ekuthandeni. Kwaye kwinkampani ene-cash-straps kwaye engakwaziyo ukufumana uphawu lophawu lobuchwephesha, kutheni ungahambeli kwi-logo enexabiso eliphantsi? Babeya kwenza ngaphandle kwayo nayiphi na enye into.
Ndingathanda ukuba wenze iposti yokuba kutheni uya kuthintela ezinye / uninzi lwezi nkonzo!
Juni 9, 2010 ngo-1: 38 PM
I-GeniusRocket (www.geniusrocket.com), ekhokelwa ngu-ex-AOL exec Mark Walsh kwaye iqhutywa ngu-Peter LaMotte, ine-class class ye-crowdourcing ye-logos kunye nezinye iimfuno zokuyila.
Nov 2, 2010 kwi-4: 25 AM
Enkosi ngokwabelana ngoluhlu!
Sisandula ukwazisa indawo entsha yokhuphiswano yoyilo: http://www.logoarena.com
Okt 10, 2011 ngexesha 6:10 AM
Nceda ususe isimlogododignign kuluhlu lwakho kuba yiFRAUD. Jonga http://pondpad.com/forum/viewtopic.php?id=3856 andhttp: //www.wordpressblue.com/2009/08/marvel-logo-designs/
Okt 10, 2011 ngexesha 8:16 AM
Enkosi, Michaël! Ndizisusile kuluhlu kwaye ndongeza i-Creattica.
Novemba 30, 2011 ngo-3: 43 PM
Lumkela uYilo loYilo lweMilo. Hlala kude ukuba bathathe iminyaka ukuze baphendule. Ukungaqhubi kakuhle.
Jul 3, 2012 ngo-11: 54 AM
Epreli 16, 2013 ngo-7: 46 PM
Kutshanje ndenze ilogo kunye http://www.logotypers.com Bathathe umzobo wam bawuguqula wabangumboniso wobugcisa ngeedola ezili-10 kuphela (kodwa kuya kufuneka ulayishe umzobo, okanye ippt okanye into yokubakhokela)
Epreli 16, 2013 ngo-8: 19 PM
Enjani yona ingcinga entle! Ndongeze iiLogotypers kwicandelo lazo. Enkosi!
Meyi 21, 2013 kwi-6: 04 AM
Zonke izibonelelo zokwabelana nge logo ziyanceda, uyilo olumangalisayo kunye nenkcazo-ntetho yoyilo Izinto ezintle ekwabelwana ngazo zezakho. Ukuxabisa kakhulu kwaye uzive unombulelo ngokwabelana othandekayo.
Meyi 13, 2015 kwi-3: 26 PM
Ndiyaluthanda olu luhlu. Inyani enikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhetha abantu kunye namakhonkco, wenze kakuhle… lo ngumgcini!
Meyi 13, 2015 kwi-8: 21 PM
Enkosi kakhulu Gabriella!
Okt 17, 2015 ngexesha 1:34 AM
Epreli 21, 2016 ngo-8: 02 PM
Meyi 30, 2016 kwi-3: 12 AM
omg, ezo zi greats
Meyi 30, 2016 kwi-3: 14 AM
amakhonkco amakhulu, tnx
Juni 28, 2016 ngo-9: 25 AM
Ilogo ngumfanekiso wesipili wegama lakho. Iresiphi yakho yokwenza ilogo inomdla kakhulu.
Ewe, ilogo yeNike yaxabisa i $ 35 ekuqaleni kodwa ngoku ixabisa ngaphezulu kwe- $ 600,000. Ukuyila kuphela ilogo elungileyo akunokukunceda ukhulise ishishini lakho. Iinkonzo zakho kunye neemveliso kufuneka zibonise ukomelela kwe logo yakho.
Okt 4, 2017 ngexesha 6:02 AM
Ndikhangela iikhonsepthi zoYilo lweLogo ngokwenza ilogo eyahlukileyo kwaye ndafumana iposti yakho. Enkosi ngale posi. Inemibono elungileyo yokufaka isicelo kwiprojekthi yam entsha.
Agasti 29, 2018 kwi-1: 30 AM
Enkosi ngeengcebiso zakho ezibalulekileyo
Ngomhla wama-20 ku-Disemba 2019 ngo-9: 16 AM
Iposti entle malunga noyilo lwe logo. Ngokuqinisekileyo ndafumana inkuthazo enkulu kwisithuba esitsha. Enkosi itoni ngale Doug, vuya xmas!
Enkosi kakhulu ngezimvo ezintle uSally! Ndiyathemba ukuba ubuneholide engakholelekiyo.
Meyi 16, 2021 kwi-12: 19 PM
Juni 29, 2021 ngo-9: 49 AM
Ezinye iiLogo zoYilo eziQinisekisiweyo zokuKhuthaza